Rosia: Tsy hita ireo mariky ny vidin’entana tao amin’ny tempoly · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Janoary 2019 4:17 GMT
Raha nikaroka vaovao momba ny fanakatonana ny LiveJournal vao haingana, dia tafiditra tao anatin'ity zavatra tsy misy ifandraisany ity (RUS) avy amin'i Anton Nossik (mpisera LJ dolboeb) aho, iray amin'ireo olona miandraikitra ny Sup, orinasa fampitam-baovao antserasera Rosiana mitantana ny ampahany “miteny Rosianina” amin'ny LiveJournal miara-miasa amin'ny Six Apart:
Tsy nijanona tao amin'ny toerana intsony ny lisitry ny vidin'entana ho an'ny tolotra ara-barotra nomena tao amin'ny [Katedralin'ny Kristy Mpamonjy ao Moskoa], izay napetrak'ireo bilaogera mba hahafaly ny masontsika elaela kokoa. Tsy mbola feno herinandro akory dia efa nesorina mangingina tsy ho hitan'ireo mpiserasera ny lisitry ny vidin'entana. Saingy toa hita fa nahavita niala tamin'ny teritery avy amin'ny mpampiasany sahiran-tsaina tamin'ny fivoahan'ny vaovao ny sampana ara-barotra tao amin'ny Tempolin'Andriamanitra ka nisoroka ny bankirompitrin'ny mpamahana azy antserasera.
Vokatr'izany, manana zavatra tena hafahafa be isika. Banga ny pejin'ny lisitry ny vidin'entana, ary ny hany fomba ahafantarana ny vidin'entana dia amin'ny alalan'ny famakiana ireo kaontin'ny bilaogera, na amin'ny fijerena ny cache ao amin'ny Google. Mandritra izany fotoana izany, tsy voakitika mihitsy ny sisa tamin'ireo pejin'ny dokam-barotra ary mampiroborobo ireo karazana hetsika ataon'ireo “mpanakalo vola” ao amin'ny tempoly. Ireto, ohatra,dokambarotra ho an'ny olona te-hanofa efitra hanaovana valan-dresaka ao amin'ny Katedraly] (miaraka amin'ny sary). Ary indro ny dokambarotry ny garazy ambanin'ny tany izay hanafenan'ireo Rosiana olom-bitsy mpanefoefo matahotra an'Andriamanitra ny Maybach, Lamborghinis sy Maseratis azy ireo mba tsy hisy fahatezerana sy ny fitsiriritan'ny mpiray tanindrazana (banga ihany koa ny lisitry ny sarany ami'ity tolotra ity, saingy misy laharana finday azo antsoina raha te-hahafantatra ny vidiny).
Mpisera LJ breqwas manome fanazavana (RUS) ny antony mahatonga ny varotra be dia be ao anatin'ny fiangonana lehibe ao Rosia: